Windows ama office la soo deg. - Hoyga Aqoonta
Windows ama office la soo deg.
Waxaa la qoray : [ 24-09-2017 ]
A Salaamu Calaykum
Dhammaan Aqoonyahannada Hoyga Aqoonta meel walba oo ay joogaan.
Windows ma kaa xumaaday ama office amase kumbiyuutarka ma ku samaysay (Format) oo ma tirtirtay!!!
Ma haysataa seeriyaalka windowska oo wax walba ha dhacaane dhib saas ahi ma ku haysataa?
Amase, ma'u baahantahay windows inaad dvd ku duubatid. Barnaamijkan ayaa kuu fududaynaya oo sida ugu sahlan kuugu soo dejinaya
windows iyo wixii la mid ah oo ay samayso shirkadda Mayk-rosof (Microsoft)t.
Dabinkan kula soo deg hoose
Isagoo faah-faahsanna sidan ayuu kuugu muuqan inshaa'allaah
Marka aad soo dejiso uma baahna inaad ku shubto kumbiyuutarka oo
isla markaba wuu kuu shaqayn. Waxaad la soo degi kartaa windows
noocyadiisa kala duwan sida, windows 7, 8.1,10 iyo office
Haddii ay dhibi kaa hayso sida loogu shubo (DVD) ama barnaamijyada lagu duubo aadan aqoon fiican u lahaynna barnaamijkan hoos aan
ku xusay ayaa ugu fudud oo ay soo diyaarisay Mayk-rosoft (Microsoft).
Waa barnaamij yar oo aan u baahanayn in kumbiyuutarka lagu shubo kuna weydiinaya meesha uu ku jiro ama khaanadda aad gashatay windows-ka kor ku xusan ee ISO.
wuxuu ku leeyahay next dheh markaad xustid, horayna u sii wad illaa uu kaa weydiiyo (USB/DVD) markaa dooro kan aad haysatid markaas oo kuu fudud
filo markaana inuu toos u duubo.
Dabinkanna kula soo deg, bog buu kuu furayaa dhanka midigta waxaa kaa qabanaya qoraal ah (DOWNLOAD) riix oo la soo deg.
Waad mahadsantahay aqoonyahan, wixii codsi ahna faallo ii reeb. Mar kale mahadsanid Aqoonyahan.
Mowduucii hore : Windows ama office la soo deg. -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Afrikaan
Jawaabta: Windows ama office la soo deg.
Aad iyo aad baan kaaga mahad naqayaa sxb horay u socod wanaagsan
Waxaa la qoray : [ 06-10-2017 ]
salamu calaykum. Afrikaan waan mahad naqi bandhigaan cajiibkaa sidan u bartay barnaamij.com waxbaa ii kordhay sidaan u tijaabinayay hada dhibta i haysata waa markaan kushubo windows xagee kakeenayaa serial number buu iga rabaaye. windows 7 yaan isticmaalaa. mahadsanid akhi
Waxaa la qoray : [ 11-10-2017 ]
Ruun yarey ku mahadsanid su'aashaadan. Haddaan kaaga jawaabo su'aashaada kumbiyuutar walba waxaa ku yimaada dhiniciisa hoose warqad ay ku qorantahay windows serial number oo sidan hoose kuugu muuqata. Qoraalkaas marka aad fiirisid waxaa kuugu qoran aqoon ku saabsan windows-ka nooca uu yahay, tiradiisa dheer ee ah 25 tiro. marka nooca aad la soo dagaysid ha'ahaado kan hoos kuugu xusan mar walba.
Waa na muuqaalkan hoose oo kale. Seeriyaalku waa kan tirtiran ee khadku marsan yahaye la soco
aqoonyahannada, dabinkan, dhacaane, dhammaan, dhib, dvd, format, haysataa, hoose, joogaan, khadku, kumbiyuutarka, ma'ubaahatay, mayk-rosoft, microsoft, office, saas, sahlan, samaysay, seeriyaalka, seeriyaalku, shirkadda, tirtirtay, windows, xumaaday
Saacaddu hadda waa 04:30 AM.